Qualcomm SM7150 sy SM6150: antsipirian'ny tafaporitsaka amin'ny SoC roa | Androidsis
Ny antsipiriany dia naseho momba ny Qualcomm's SM7150 sy SM6150, ny mpikirakira manaraka hanomboka
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanambara chipset vaovao i Qualcomm: ny snapdragon 675, processeur 11nm natao manokana ho an'ny telefaona filalaovana. Ankehitriny, vaovao vaovao momba ny chipset vaovao roa avy amin'ny mpanamboatra, izay an'ny sokajy antonony ihany koa no nipoitra. Antsoina ireo chipset SM7150 sy SM6150.
Navoaka tamina tambajotra ny fampahalalana momba ireo SoC roa ireo. Samy mpikirakira fototra valo izy ireo, fa miaraka amina processeur sary samihafa, cores CPU ary hafainganam-pandeha famantaranandro. Tsy izay ihany no hita momba ireo SoC roa ireo; misy bebe kokoa. Manitatra anao izahay!
Ny SM7150 dia miharihary fa mahery noho izy roa tonta. Raha ny fahitana azy, ity chipset ity dia tafaporitsaka tao anaty fitaovana fanandramana, izay manana fakan-tsary 12 sy 13 MP fakan-tsary roa ao aoriana ary fakan-tsary 20 MP eo aloha. Ny fampisehoana an'io fitaovana io dia voalaza fa QuadHD +, izay midika fa manana tahan'ny 18: 9 na mitovy aminy.
Ny ankamaroan'ny telefaona mid-range sy telefaona ambony dia mazàna mijanona amin'ny fanapahan-kevitry HD + sy FHD +, noho izany mahaliana ny mahita fa manana efijery QHD + ity fitaovana ity. Na izany aza, tsy misy fampahalalana fanampiny momba ny CPU sy GPU an'ny SM7150.
Voalaza fa ny fitaovan'ny andrana izay SM6150 Izy io dia manana ny fakan-tsary fakantsary roa eo an-damosin'ny SM7150, fa ny fakan-tsary ambany 13MP. Ho fanampin'izay, ity iray ity dia manana efijery FullHD + miaraka amina vahaolana 2.160 x 1.080 teboka (18: 9), izay manana diagonaly farafahakeliny 5.99 santimetatra ny habeny.
Ny tahirin-kevitra hafa nazava dia manolotra izany Izy io dia natsangana tamin'ny dingan'ny 11 nmtoa azy Snapdragon 675 vaovao. Ny SDM675 dia novokarin'i Samsung, noho izany dia misy ny fahafahan'izy ireo mandray an-tanana ny famokarana ny SM6150. Antenaina hambara amin'ny taona ho avy ireto chipset roa ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny antsipiriany dia naseho momba ny Qualcomm's SM7150 sy SM6150, ny mpikirakira manaraka hanomboka
Belle Launcher, Launcher tena hafa amin'ny Android-nao
OUKITEL U23: finday avo lenta vaovao misy ny marika